grade Industrial Carboxymethyl neselulosi (CMC) - Shanghai shem Ukunyaniseka. Co., Ltd
grade Industrial Carboxymethyl neselulosi (CMC)
Sodium Carboxymethyl neselulosi 【Intshayelelo】 Igama: Sodium Carboxymethyl neselulosi Ufinyezo: CMC Ezinto Formula: C6H7O2 (OH) 2OCH2COONa 1.Characteristics: Sodium Carboxymethyl neselulosi (CMC) yi powder emhlophe okanye bulubhelu oko kukuthi, esha Ekse kunye non-toxic.It uye phezulu hygroscopicity kwaye enyibilikayo emanzini ukwenza ulwelo zamafu. It is a electrolyte polyanionic kwaye iphela. It unokuhle ubushushu-uzinzo, ukumelana netyuwa impahla bhanya-bokwakha. 2.Applications Ukuze cera ...
Supply Amandla: 15000 Ton / Unyaka
Sodium Carboxymethyl kwincindi
Igama: Sodium Carboxymethyl kwincindi
Ifomula Ezinto: C6H7O2 (OH) 2OCH2COONa
I-Sodium Carboxymethyl kwincindi ( CMC ) yi powder emhlophe okanye bulubhelu oko kukuthi, esha Ekse kunye non-toxic.It uye hygroscopicity eliphezulu kwaye enyibilikayo emanzini ukwenza ulwelo zamafu. It is a electrolyte polyanionic kwaye iphela. It unokuhle ubushushu-uzinzo, ukumelana netyuwa impahla bhanya-bokwakha.
Ukuze c eramics
Kuba Painting kunye Ink
CMC inokusetyenziswa kwakhona zokwaleka yephepha, ibhetri, iingcongconi-mathumbu isiqhumiso, icuba, elukiweyo, iwelding, coemetic.
CMC Product igcwele oluzaliswe zonke iinkcukacha kwingxowa polyethylene engaphakathi luqiniswe ibhegi iphepha 3 sangqa-, okanye umphanda iphepha okanye iphepha bhokisi, ubunzima net yi 25kg bag ngamnye.
4. Nokuthutha Ukugcinwa
Ukukhusela imveliso ukufuma kwaye ufumile.
Musa ukubeka kunye namanye amachiza.
Previous: grade Ukutya Carboxymethyl neselulosi Sodium (CMC)
Okulandelayo: grade Industry ethyl neselulosi (EC)
Carboxyamethyl neselulosi Ukutya CMC
Carboxymethyl neselulosi Price
neselulosi Industrial Grade CMC
yodongwe Grade CMC
CMC China Supplier
CMC Kuba yodongwe zeBakala
CMC For Wokuhlamba izitya
iCentral Moderation Medicine
CMC ngokuba iyogurt
CMC ezinto Weight
CMC Mosquito okuzingela Grade
CMC umgubo zokutshaya
CMC Powder For lodongo
CMC Ukubola Cola Grade
CMC Isetyenziswa In Ice Cream
Ubunjani Good CMC Powder
High Purity neselulosi CMC
viscosity High CMC
Phantsi Price Carboxymethyl neselulosi (CMC)
Low viscosity CMC
Na-CMC Ukutya Grade
Ukupeyinta kwiBanga CMC
Paper Ukwenza kwiBanga CMC
kungako CMC Kuba Intlama
Tobacco kwiBanga CMC yaluthuli
I-Methyl Cellulose yenyama esekwe kwizityalo
Yintoni inyama esekwe kwizityalo? Inyama esekwe kwizityalo yinyama eyenziwe kwizityalo. Yenzelwe ngokukodwa kwaye yenzelwe ukubonakala ngathi, ukunambitha okunje, kwaye yipheke inyama eqhelekileyo. Inyama esekwe kwizityalo inokuba uhlobo lwe-burger pat ...